ပန်ဒိုရာ: ရေပြင်ပေါ်က အလုံးလေးတွေ
အမပန်ဒိုရာရေ တကယ်ကိုစိတ်ပူမိတာပါ။ အရာတစ်ခုဖြစ်တည်ပြီးသွားရင် ပျောက်ပျက်တတ်တယ်ဆိုတာကို သိသိကြီးနဲ့ ပူပန်မိပြန်ရော။ စာလေးတွေဆက်ဖတ်ရမယ်ဆိုရင် တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါဗျာ။
ဒေါ်လေးရေ့ ပိတ်ထားတာတွေ့တော့ ဘာဖြစ်တာလည်းဆိုပြီး စိတ်ပူမိသေးတယ် ။ နောက်ဆိုမပိတ်ပါနဲ့ ဒီလိုအမြဲလာနေကျ လေးစားနေကျ ဘလော့တွေမတွေ့ရရင် နဂိုးတည်းက ကျချင်နေတဲ့ Blogging စိတ်တွေ ပိုဆိုးလွန်းလို့ ။ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ ရှယ်ပဲ ဒီတစ်ခါ ဘ.ယ်သူရိုက်တာတုန်း ပန်ဒိုရီလားး =)
ကွိကွိ.. သားသားလည်းပူဖေါင်းလွှတ်ချင်တယ်။ လာခေါ်ပါ.. ။း(
မပန်ရေ.. ဘာများဖြစ်လို့လည်းလို့ စိတ်ပူသွားတာတော့ အမှန်ပဲ.. လင့်တွေက လျှောက်သွားကြည့်တော့လည်း မရဘူး.. အခုမှ ပြန်တက်လာလို့ ပျော်သွားတယ်.. တကယ်... :)
ပုံလေးတွေက လှတယ်.. အဲဒီလို ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေး စာရေးပြီး ရေထဲချလိုက်တော့လည်း ပျော်ပြီး စိတ်ချမ်းသာမှာ အမှန်ပဲ.. ပိတ်ရက်တွေနဲ့
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ အဲဒီနေရာကိုရောက်ပြီး ဘောလုံးလေးပေါ်မှာ ဆုတောင်းတစ်ခုခု ရေးပါဆိုရင် ဘာဆုတောင်းရမလဲလို့စဉ်းစားနေမိတယ်...
အော်... ဆု ဆိုတာ ကိုယ်တောင်းတိုင်း ပြည့်တာမှ မဟုတ်တာပဲလေ... နော်...။
ပြည့် ပြည့် မပြည့် ပြည့်... ၂၀၀၉ အတွက် တခုခုတော့ ဆုတောင်း ဖြစ်မှာ အမှန်ပဲ...
ဂယ်ပါ...ပဲ စိတ်ပူသွားတယ် ဘာများ ဖြစ် သို့တည်းမဟုတ် အီစကို တစ်ယောက်တည်းကိုများ ဘမ်းလိုက်လားမသိဘူးးးးလို့ ဟိုလူ့ လိုက်မေးဒီလူလိုက်မေးမိတယ် ။ဟီးးးးးး
မပန်ဒိုရာရေ.. ဘလော့လေးပြန်ဖွင့်လို့ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်.. ကိုယ်ပညာယူစရာဘလော့လေးမို့ ဖွင့်မရတာ စိတ်ပူမိပါတယ်။ မပန်တို့နေရာလေးက သာယာလိုက်တာနော်..
ဒါပန်ပန် လက်ရာပါ။ ပန်ဒိုရီ ဆိုရင် ဒီထက် အနေအထားပိုကောင်းတယ။်
ဘန်ဒါကတော့ ဂဒီးဂဒီးပြောင်းနေတာဘဲ. ဟွန်း.
ဘော်လုံးလေးတွေကြည့်ပြီး လှလို့ ဆုတောင်းဖို တောင်မေ့သွားတယ်။
ညဘက်ကြီး မြင်ခဲ့ပါတယ် .ဘောလုံးတွေကို..
သမီးက ဘာလုပ်မှန်းမသိဘူး.. ခရစ်စမတ်အတွက် အလှလုပ်ထားတာလားလို့... :P
invitation only ဆိုလို့ ဖိတ်စာ ဘယ်လိုရမလဲ လိုက်မေးကြည့်သေးတယ်။ အသစ်တွေကို ဆက်မျှော်မယ်နော်။
အလည်လွန်နေလို့ ဘလော့ဂ် တူတူပုန်းတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။ သောက မပွါးလိုက်ရလို့ တော်ပါသေးရဲ့။
သို့သော် ရေရှည်အတွက် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ အဲဒီလို မကျီစားပါနဲ့။ အသည်းနုသူများ ဒုက္ခ ရောက်ကုန်ကြမယ်။ နှစ်သစ်မှာ ခုနစ်ရက် သားသမီးများအပေါ် ဂရုဏာ ထားပါ...အဟဲ။
ဒီနေ့ မေးလ် လာစစ်တော့ ပိုစ့်အသစ် ပို့ထားတာတွေ့တော့မှ ပျှော်သွားတယ်..
blog အမြန်ပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့ ဒေါ်ကြီးပန် ကျေးဂျူး
ပြီးတော့ ပူဖောင်းလေးတွေပို့စ် ကျေးဇူး
စိတ်ကူးယဉ်တခဏပဲဖြစ်ဖြစ် ပူဖောင်းလေးပေါ် ချရေးတာလေးလုပ်ချင်ပ ရောက်ရင် ပန်ပန့်ဖို့ပါ တစ်လုံးပိုရေးခဲ့မယ်ဏော် တိရား
ဘာဆုမှ တောင်းစရာမလိုတဲ့ သူ ဖြစ်ရပါလို၏ လို့ပဲ တောင်းချင်တယ်
စိုးရိမ်သွားတဲ့ စာရင်းထဲ ပါသေးတယ်။
i'matree hugger, so i cannot agree with ur wish to float away the plastic balls. it would beahazard to nature :)
စိတ်ကူးယဉ် ပူဖောင်းတွေကို ခဲဆွဲထားတဲ့ ပုံ . . .
ဒါနဲ့ .. မကြီးပန် ဘလော့ကို ခဏခဏ မပိတ်ရဘူးနော်..
အသစ်မရှိလည်း အဟောင်းတွေ ပေးဖတ်ပါ။